Archive du 20170527
Vahoaka mahantra,fanjakana be marenina �Ho avy ny fidinana an-dalambe !�
Mamerimberina foana aho fa raha fampihavanam-pirenena tena izy dia tsy maintsy hatao mba hisian�ny filaminana eto amin�ny tany sy ny fanjakana.
Fiainam-pirenena sy fifidianana Miomana fatratra ny TIM
Omena fiofanana ireo mpitarika ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), avy amin�ireo distrika 13 amin�ny faritra Analamanga, ka nosokafana omaly teny amin�ny Magro Behoririka.
Imbiky Anaclet � Tsy ampy firaisankina ny fiarahamonim-pirenena. �
Mbola marobe ny lal�na tsy ampiharina sy tsy hajain�ny vahoaka ka mahatonga izao zava-misy izao, hoy ny mpahay lal�na Imbiky Anaclet.
Lal�mpanorenana tandrametaka 2010 Ahitana tsininy, 7 taona aty aoriana
Mitaky ny fanovana lal�mpanorenana avokoa ankehitriny ny fianakaviamben�ireo mpanao politika niara-nitantana tao anatin�ny fitondrana tetezamita lavareny.
Ahirato ny maso e!
Dia lasa indray ny saiko ry Jean mahita antsika Gasikely sasantsasany mitehaka sy midera ary faly sy tretrika ery amin�ny in-droa na in-telo mahandro zarazarain-dry manga kravaty mba hanaovany an�ilay fomba fanaony hoe domina tapany handoa erany ity !
Orinasa eto Madagasikara Maro no tsy mazava
Orinasa manodidina ny 28 izay 80%-n�ireo mpanondrana entana any ivelany ary 42 izay mameno ny 85%-n�ny tsena anatiny eto Madagasikara,
Raharaha �Claudine Razaimamonjy� Nampiova ny zava-nisy tao amin�ny fitsarana
Miankin-doha amin�ny fahefana mpanatanteraka ny rafitra miady amin�ny kolikoly eto Madagasikara, hoy ny mpandrindra ireo hetsika iadiana amin�ny kolikoly eo anivon�ny Rohy Ramarosaona Faraniaina tamin�ny fivahinianany tao amin�ny onjampeo iray.
Ady totohondry Malagasy ho any Congo Nivoaka ny anaran�ireo atleta voafidy
Nohamafisin�ny federasion�ny ady totohondry Malagasy tamin�ny alalan�ny filoha lefiny, Atoa G�g� Bosco, omaly teny amin�ny ANS Ampefiloha fa nahemotra amin�ny
Tsy azo iadian-kevitra intsony fa mihavery tantara hatrany isika Malagasy ankehitriny.
G5 Ho fantatra anio izay handrafitra ny tarika
Tarika iray vao novolavolaina nanomboka ny fiandohan�ny volana aprily lasa teo ny G5. Fahitalavitra tsy miankina iray eto an-drenivohitra no tompon-kevitra hahafahana manangana tarika malaza hanana ny maha izy azy sady hiezaka sy hankafy ny fikarohana ihany koa.
Fanentanana ara-pahasalamana Miditra an-tsehatra ny fampiasana SMS
Vita sonia ny alatsinainy 22 mey 2017 teo ny fifanaraham-piaraha-miombon�antoka ho fanomezan-danja ny fahasalamana eto Madagasikara teo amin�ny minisiteran�ny fahasalamana, ny PSI Madagascar ary ny Telma Madagascar.
Fetin�ny reny Voakarakara manokana ireo tera-bao ao Befelatanana
Tsy manadino ireo vehivavy vao tera-bao tonga miteraka etsy amin�ny hopitaly Befelatanana ny orinasam-pifandraisana Airtel amin�izao ankatoky ny fetin�ny reny izao.
Famatsiana omby Hiato tanteraka amin�izay
Nanazava ny zava-mitranga amin�izao fotoana izao ao Tsiroanomandidy ny mpitondra tenin�ny FIraisankinan�ny MPIhary OMBY avy amin�ny foko 18 na ny FIMPIOMBY, Randielison William.
Tombola BNI Madagascar 4 mianadahy no nitsikian�ny vintana
Toy ny fanaony mahazatra dia nanolotra fanomezana ho an�ireo olona efatra tsara vintana nandray anjara tamin�ilay tombola nokarakarainy nandritra ilay foara iraisam-pirenena notanterahiny teny amin�ny Forello Expo Tanjombato ny banky BNI Madagasca
Orinasa Orange Hanome tolotra miavaka ho an�ny reny
Hanome tolotra miavaka ho an�ny reny rehetra ny orinasam-pifandraisana Orange amin�izao ankatoky ny fankalazana ny fetin�ny reny izao.
Mangataka ireo tompon�andraiki-panjakana toy ny solombavambahoaka, ny Ben�ny tan�na,